နွေဦးကလစ်များ မှအကောင်းဆုံး နွေဦးကလစ်များ မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
ကြေးစားထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်ပြည်ပပို့ကုန်အဖြစ်, Tong Na Enterprise Co., Ltd. ၏ဒီဇိုင်း, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကုန်သွယ်မှုအတွက်အထူးပြုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်သည် နွေဦးကလစ်များသင်ပြဿနာများရှိသည်ဒါမှမဟုတ်တခြားကုမ္ပဏီတွေရဲ့ထုတ်ကုန်များနိမ့်ကျအရည်အသွေးကစိတ်ပျက်နေကြသည် .If ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကြိုးစားဖတ်ရှုပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်စုံလင်စွာသင်နှင့်သင့်ဖောက်သည်ဝစွာကျွေးမည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်တရုတ်ဖောက်သည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုထောက်ပံ့။
ခိုင်လုပ်ခြင်းနှင့်ပညာရှင်များနှင့်ငါတို့သည်အစဉ်မပြတ် prompt ကိုဝန်ဆောင်မှုပေး a​​sap သင့်စုံစမ်းရေး / အမျိုးမျိုးလိုအပ်ချက်များကို reply ကျွန်တော်တို့၏အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါလိမ့်မည်ကတိပေးပါ။ ကျေးဇူးပြု ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်အတွက်
Clip သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဟော့တစ်ခုဖြစ်သည်။-ထုတ်ကုန်ရောင်း,လျင်မြန်သော အဆက်မပြတ် ထုထည်ဖြင့် ထုတ်လုပ်သည်။.ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိကဖောက်သည်များမှာ ဥရောပနှင့် အမေရိကန် အဓိက မော်တော်ကားထုတ်လုပ်သူများဖြစ်သည်။.
12.5*0.6mm Surface Treatment Black,မော်တော်ကားအစိတ်အပိုင်းများ,စည်းဝေးပွဲအစိတ်အပိုင်းများ,ချည်ကြိုးများ
မှာယူမှုအရေအတွက်ပေါ်မူတည်၍ ငွေပေးချေမှုစည်းကမ်းချက်များ ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။
အဆက်မပြတ် အော်တိုမြင့်သည်။-မြန်နှုန်းထုတ်လုပ်မှု,360 တပ်ဆင်ထားပါတယ်။-ဒီဂရီ မိုက်ခရိုစကုပ် မှန်ဘီလူး အပြည့်အစုံအတွက် အလိုအလျောက် စစ်ဆေးရေးစက်-ပမာဏစစ်ဆေးခြင်း။,ထို့အပြင် ကျွမ်းကျင်တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်း။,အမြန်ပို့ဆောင်ခြင်း။,တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေး,နှင့်နမူနာစမ်းသပ်မှုပေးနိုင်ပါသည်။
ပစ္စည်းကို ထိုင်ဝမ် China Steel မှ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူပါသည်။,လုံလောက်သော ပမာဏနှင့် တည်ငြိမ်သော အရည်အသွေး
TS16949 ISO90001 လက်မှတ်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.stampingparts.org/my/spring-clips-fasteners.html
Stainless Spring Clips
အကောင်းဆုံး နွေဦးကလစ်များ ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် နွေဦးကလစ်များ ၏အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
Clip သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းရဆုံးထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။,၎င်းကို အမြောက်အမြားနှင့် အလိုအလျောက် အဆက်မပြတ် ထုတ်လုပ်နေပြီး ဥရောပနှင့် အမေရိကန်သို့ တင်ပို့သည်။ 15*0.6mm,Surface Treatment Saponification,မော်တော်ကားအစိတ်အပိုင်းများ,ချည်ကြိုးများ ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရ ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်။,အနက်ရောင် သို့မဟုတ် အရောင်စုံ မျက်နှာပြင် ကုသမှု..စသည်တို့ကိုလည်း ဖောက်သည်များက ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ပို့ဆောင်မှု ပမာဏအလိုက် ငွေပေးချေမှု စည်းကမ်းချက်များကို ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။ အဆက်မပြတ် အော်တိုမြင့်သည်။-မှိုထုတ်လုပ်မှုအရှိန်,အပြည့်အဝအတွက် 360degree အဏုကြည့်မှန်ဘီလူးဖြင့် အလိုအလျောက်စစ်ဆေးခြင်းစက်ကိုလည်း တပ်ဆင်ထားပါသည်။-ပမာဏစစ်ဆေးခြင်း။,ထို့အပြင် ကျွမ်းကျင်သော QC တိုင်းတာခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း။,တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေး,အမြန်ပို့ဆောင်ခြင်း။,နမူနာစမ်းသပ်ခြင်းကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။ ISO90001 နှင့် TS16949 လက်မှတ် ထိုင်ဝမ်ထုတ်ကုန်
Clip သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။’၎-ထုတ်ကုန်ရောင်း.၎င်းကို စဉ်ဆက်မပြတ် တံဆိပ်တုံးထုပြီး လျင်မြန်သော ထုတ်လုပ်မှုဖြင့် ထုတ်လုပ်သည်။.ဖောက်သည်တွေထဲမှာ အရှေ့တောင်အာရှ,ဥရောပနှင့် အမေရိကန် မော်တော်ကား ထုတ်လုပ်သူများ. 11*12.7mm,အမည်းရောင်မျက်နှာပြင် ကုသမှု,မော်တော်ကားများတွင် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်းများ,အစိတ်အပိုင်းများ စုစည်းပါ။,ချည်ကြိုးများ ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရ ဒီဇိုင်းကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။,ပုံပန်းသဏ္ဍာန် ကုသမှုအမျိုးမျိုးကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ပို့ဆောင်မှုပမာဏအလိုက် ငွေပေးချေမှု စည်းကမ်းချက်များကို ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တိုင်းတာခြင်း။,360 ဒီဂရီ အဏုကြည့်မှန်ပြောင်း အော်တို စစ်ဆေးရေးစက် တပ်ဆင်ထားသည်။,တည်ငြိမ်သောပေးပို့မှု,အရည်အသွေးမြင့်မားသော,စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့် လျင်မြန်သော တံဆိပ်တုံးထုတ်လုပ်မှု,နမူနာစမ်းသပ်မှုများအတွက် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုင်ဝမ် China Steel မှ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူပါသည်။,တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေးနှင့် လုံလောက်သောထောက်ပံ့မှုဖြင့် ISO90001 TS16949 လက်မှတ် ထိုင်ဝမ်ထုတ်လုပ်မှု
Clip သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။’s ခိုင်မာတဲ့ထုတ်ကုန်,အရှေ့တောင်အာရှနှင့် ဥရောပနှင့် အမေရိကန် ကားထုတ်လုပ်သူများမှ ထောက်ပံ့ပေးသည်။.၎င်းကို စဉ်ဆက်မပြတ် တံဆိပ်တုံးထုပြီး လျင်မြန်သော ထုတ်လုပ်မှုဖြင့် ထုတ်လုပ်သည်။ 12.6*11.7mm,Surface Treatment Zinc Plating ၊,မော်တော်ကားအစိတ်အပိုင်းများ,ချည်ကြိုးများ,စည်းဝေးပွဲအစိတ်အပိုင်းများ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးနှင့် ပုံပန်းသဏ္ဍာန် ကုသမှုများကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ပို့ဆောင်မှုပမာဏအလိုက် ငွေပေးချေမှု စည်းကမ်းချက်များကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။ မြင့်သည်။-speed stamping နှင့် လျင်မြန်သော ထုတ်လုပ်မှု,လျင်မြန်ပြီး တည်ငြိမ်သော ပို့ဆောင်မှု,ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အသိအမှတ်ပြု QC ဝန်ထမ်းများမှ တိုင်းတာခြင်း။,360 လည်း ပါဝင်ပါတယ်။-အပြည့်အဝစစ်ဆေးရန်အတွက် ဒီဂရီ အလိုအလျောက် အဏုကြည့်စစ်ဆေးရေးစက်,အရည်အသွေးမြင့်မားသော,နမူနာစမ်းသပ်ခြင်းကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။ တရုတ်သံမဏိ ထိုင်ဝမ်ပစ္စည်း,တည်ငြိမ်သောထောက်ပံ့ရေးနှင့်အရည်အသွေး TS16949 ISO90001 လက်မှတ် ထိုင်ဝမ်မှာ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။